Akụkọ - Ndụmọdụ iji ghara ịwụsa ajị anụ na ajị ajị anụ
Ndụmọdụ maka ịwụfu ajị anụ na ajị anụ woolen
1. Agaghị eji ajị ajị ajị ajị ajị ajị agba: Ghichaa tablespoon stachi na ọkara bezin mmiri oyi, gbanye ajị anụ woolen wee wepụ ya n'agbanweghị agbagọ ya, gbanye ya ma debe ya na mmiri na obere ịsa uzuzu, gbanye ya maka oge 5. net.
2. Ngwurugwu dị larịị ga-etolite na ite aluminom ma ọ bụ ite aluminom mgbe oge ụfọdụ gasịrị. Tinye skins nduku ahụ n'ime, tinye mmiri kwesịrị ekwesị, sie, sie maka ihe dịka nkeji 10, wee wepụ.
3. Thelọ kichin nwere ọtụtụ mmanụ na ọ dịghị mfe ihicha. Tupu ịmalite ala, ị nwere ike iji mmiri ọkụ mee ka mmanụ ahụ dị ala doo mmiri ahụ iji mee ka ntụpọ ahụ dị nro, wee wụsa mmanya mmanya na mmiri ahụ, wee kpochaa ala iji wepụ unyi mmanụ na ala.
4. Mgbe ị gbanye gas gas ka ọ gbanye ọkụ, ọ bụrụ na ire ọkụ ahụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ pụtara na gas na-ere ọkụ na-ezughị ezu, nke na-emebi gas. N'oge a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya idozi valvụ akara ikuku na ọnọdụ ebe ire ọkụ na-ada.
5. Mgbe ị na-eji mmiri kpo oku, ọ kachasị mma ịhazigharị ọnọdụ okpomọkụ n'etiti ogo 50-60, nke nwere ike igbochi nhazi nke ọnụ ọgụgụ mmiri ọkụ; mgbe mmiri dị elu karịa 85 degrees, nhazi nke ọnụ ọgụgụ ga-abawanye.